Ogaden News Agency (ONA) – Gumeysiga Ethiopia oo lagu cadeeyay inay Jaajusaan shacabkeeda internetka isticmaala oo ay ku talaalaan Virus isgaadhsiinta
Gumeysiga Ethiopia oo lagu cadeeyay inay Jaajusaan shacabkeeda internetka isticmaala oo ay ku talaalaan Virus isgaadhsiinta
Posted by ONA Admin	/ March 14, 2013
Wali ma ka shakiday in Computarkaaga qofkale kula isticmaalo, Emaiadaada ma ka shakiday, ma u maleysay in teleefankaaga dad ku dhex jiraan kale. Hadaba hala yaabin gumeysiga Ethiopia ayaa kusoo weeraray oo computarkaaga ku talaalay Virus magaciisa la yiraahdo finspy oo torjan ay sameyso Gamma shirkad laga leeyahay Germany oo fadhigoodu yahay UK. Arrintan waxaa cadeyay haayadaha xuquuql insaanka oo sheegay Ethiopia inay kamidtahay wadamada basaasa dadkooda iyaga oo virus ku talaala Computaradooda iyo mobiladaba.
Maxuu yahay Finspy.
Gumeysiga Ethiopia ayaa lasoo cadeeyay innuu kamid yahay wadamada ay ka taliyaan calooshood u shaqeystayaasha xasuuqa shacabkooda, wadamadaas oo suuqa ka iibsada software lagu talaalo Computarada iyo mobilada si loola socda waxa ay ku hadlayaan ama emailadooda isugu diraan.
Hadaba taliska Gumeysiga ah ee Ethiopia ka taliya ayaa kasoo gatay shirkad laga leeyahay wadanka Germany fadhigooduna yahay wadanka UK qalab lagu jaajuso shacabweynaha. iyaga oo qalabkaas ku talaalaya Computarada iyo Mobilada. Qalabkaas ayaa u sahlaya inay arkaan wax kasta oo qofkaas lagu talaalay computarkiisa uu ka aqristo computarkiisa sida Emailada uu furto, qadka skpka ee lagu hadlo oo la dhageysan karo hadalkiisa oo dhan iyo cida uu la hadlayo, sidoo kale waxaa qalabkaas lagu talaala Mobilada casriga ah oo dhan sida Iphone, iyo dhamaan mobilada Smart phones loo yaqaano waxaana qalabkaas uu saamaxaya in la dhageysto teleefan kasta uu qofkaas diro ama usoo dhaca sidoo kale waxaa la aqrin kara text messageyada usoo dhaca waxaana lala socon kara wax kasta oo uu ka gato internetka. Qalabkan waxa uu xataa saamaxaya in la daarto web camka ku yaala computarkaaga oo halkaas laga arko qofkii isticaamalayay computarka cida uu yahay si sawir looga qaato oo loo aqoonsado wajigiisa.
Qalabkan Finspy waa software waxaana sameeyay nin da’diisu tahay 31 jir oo u dhashay wadanka Germany. Ninkan oo aan wax aqoon ah horey usoo qaadan dhinaca comutarada ayaa ahaa nin musician ah oo kaministe ah. Balse waxa uu ninkan sameeyay qalabkan khatarta ah oo Aduunweynahu ku tilmaameen innuu yahay qalab halis ku ah xoriyada gaar ahaan isticaamlka Internetka. Haayadaha Xuquuql insaanka ayaa cabasho badan ka sameeyay qalabkaan iyaga oo dacwado u gudbiyay wadanka Germany sidii looga hortagi lahaa qalabkan oo gacan khatar ah ku jira.
Gumeysiga Ethiopia waxa uu bilaabay innuu sawirada caanka ah ee lagu yaqaano inay sameeyaan mucaaradka Ethiopia inay dib u sameeyaan kadibna ay soo galiyaan websiteyada sida google-ka. kadib markii qof uu arko sawirkaas oo uu furto waxaa computarkiisa soo galaya Aplication cusub si uu arko sawirkaas, ama waxa uu arkaya wax uusan horey u arkin oo qalaad. Hadaba markii sawirkaas aad furato waxaa Computarkaaga si toos ah u galaya aaladaas cusub. waxaana gumeysiga Ethiopia uu helaya innuu helo awooda computarkaaga oo lagula isticmaali karo.
Hadaba dadka waxaa looga digaya inaysan furanin waxyaalaha aysan aqoonta u laheyn oo aysan hubin websiteka. Sidoo kale waxaa looga digaya inaysan galin shabakadaha gumeysigu iska leeyahay ee ayku faafsadaan barobagaankooda sida Cakaara iyo waxii lamidka ah oo suurto gal ah inay wataan spywares nooca torjaanka oo aha waxa uu ka sameysanyahay spyfish.
Baadhitaan lasameeyay ayaa lagusoo xaqiijiyay in Taliska Ethiopia uu ka gatay qalabkan cusube ee Virus ka ah shirkada lagu magacaabo Gamma oo fadhigeedu yahay wadanka UK.
Qiimaha halkii finspy waxaa uu jooga qiimi dhan 150,000 Euro. lama cadeyn inta qalab ay gadatay wadanka Ethiopia balse waxaa la sheegay in halkii Computarba laga rabo Gumeysiga Ethiopia inay gataan 1 virus oo lacagta intaas dhan jooga si ay u maamulaan, dabagalna ugusameyaan shaqsigaas computarkiisa.
lama ogaan karo si dhibyar in Computarkaaga ama teleefankaagu uu leeyahay spyfish oo trojan ku jiro. Sidoo kale qalabkan Anti Virus haduu kuugu jiro Computarkaaga ma heli karo oo waa ka dhuuntaa anti virus oo dhan.
Sidaas awgeed waxaa muhiim ah in aad hadiyo jeer feejignaatid oo aadsan furan waxyaalaha aad ka shakido ee aadsan aqoon u laheyn. Coputarkaaga haddii aad aplication cusub uu kusoo biiro ha oggolaanin “cancel” kusame markasta oo aplication cusub kusoo biiro oo waliba update iskusameynaya sida softwareyada apple ka oo kale sidiiso kale kuugu soo biira iska ilaali.
Waxaad hadiyo jeer la socota aplicationada kuugu jira computarkaaga adiga oo ka baadhaya magaca (Win32/Belesak) hadii aplicationkaas aad aragto waxaad oggaata in weerar lagugu soo qaaday.
Computarkaaga windowskiisa kolba iska badal oo si cusub u sameyso adiga oo si cusub usoo bilaabaya islamarkaasna waxii ku jiray oo dhan tirtiraya. islamarkaasna la tasho dadka aqoonta u leh ITga.
Gumeysiga Ethiopia waa ku adagtahay inay dad badan ama shacabweynaha oo dhan ay daba gal kusameyaan waxayna u egtahay in shaqsiyaad ay markaas muhiim u arkaan inay ku talaashaan qalabkan computaradooda.
gumeysiga Ethiopia waxuu caan ku yahay cabsi badan oo uu ka qabo in afganbi lagu sameeyo iyo mucaaradka oo aad u xoogeystay islamarkaasna mucaaradka meelaha uu aadka u isticmaalo waxa weeye aaladaha internetka oo taagerayaashooda ku gaadhsiiyaan fariimahooda.
Sikastaba ha noqote ninki sameeyay softwarekan ayaa sheegay innuu la tashanayo haayadaha xuquuqul insaanka wadamada laga gadi karo iyo kuwa sida qaldan u isticmaali kara (sida Ethiopia oo kale). Hadii haayadaha Xuquuqul insaanku ay wadan ku sheegaan inay halis ku yihiin xuquuqda bani aadamka waan ka joojinayna hadii xata wadankaas aan lagu soo saarin liistada wadamada xuquuql insaanka ku tunta.